Ukusuka ekuphekiweyo ukuya ekuphekweni: iindlela ezinempilo zokutya amaqanda | Nutri Ukutya
Ukusuka ekuphekiweyo ukuya kwi-poached: iindlela ezinempilo zokutya amaqanda
UMiguel Gaton | 07/04/2022 10:43 | Ukutya
Iqanda Ngenye ye okona kutya kusempilweni kunye nokugqibelele okukhoyo: enye yezona zinto zibalaseleyo ngokwexabiso lesondlo, ezifumaneka unyaka wonke, zitshiphu kwaye ziphantsi ngeekhalori. Ngenxa yesi sizathu, kubalulekile ekutyeni ukunciphisa umzimba okanye, ngokulula, xa ucwangcisa nayiphi na indlela yokutya enempilo kunye nokulinganisela kuyo yonke intsapho.
Ngoku, njengokutya okuninzi, iindlela zokupheka iqanda banokuthetha kakhulu malunga neekhalori ezipheleleyo, ukutya okunamafutha, kunye nokugcinwa kwesondlo okanye ukususwa.
Kwaye nangona zonke zilungile, ezinye zikulungele ngakumbi kunabanye. Qhubeka ufunda ngononophelo, kuba uya kufumana izinto ezothusayo.
1 Indlela yokupheka iqanda ngendlela enempilo?
4 ziphangiwe okanye zizingelwe phantsi
7 kwi tortilla
Indlela yokupheka iqanda ngendlela enempilo?
Ngokuchaseneyo nendlela abantu abacinga ngayo, eyona ndlela isempilweni yokutya iqanda ayikrwadakodwa kuphekiwe.
Oku kubangelwa kukuba amaqondo obushushu aphezulu avelisa into ebizwa ngokuba yi-denaturation yeeprotheyini zeqanda, nto leyo eyenza ukuba kugaywe ngakumbi emzimbeni. Ngoko ke, abagijimi benza iphutha elicacileyo ngokutya abamhlophe beqanda eliluhlaza, njengoko bengaphumeleli umphumo oyifunayo.
Ngaloo nto, makhe sijonge kwiindlela ezahlukeneyo eziphilileyo zokupheka iqanda. Kolu luhlu siye saqwalasela iindlela eziqhelekileyo zobuchule; nangona kunjalo, kuba IPazo de Vilane, ifama endala yaseSpain yamaqanda akhululekileyo akhuliswe ngokukhululekileyo, akunika ezinye ezinye iindlela ezimnandi kunye nezokuqala zokupheka iqanda. Ngaphezulu kweminyaka engama-25 yokukhulisa iinkukhu ngendlela yakudala ihamba umgama omde, ngoko ke kuya kuba kuhle ukuba sisebenzise amanye amacebiso akhe.
Ukuba unayo ipani elungileyo enganamatheli, yiyo le. indlela ekhawulezayo, emnandi nenempilo yokutya iqanda. Awunasizathu sokungayifaki kwisidlo sakusasa sakho, kuba kuya kuthatha umzuzu omnye ukuyilungiselela.
Kubandakanya ukuhluka kwayo okwahlukileyo: ifakwe emanzini imizuzu engaphezulu okanye engaphantsi. Into entle ngale ndlela esempilweni yokupheka iqanda kukuba unokulungiselela ezininzi kwangaphambili kwaye ungene kuzo xa ungenaxesha elininzi. Yinqumle imifuno emitsha kwaye uya kuba nekhosi emnandi yokuqala; iqanda elibilisiwe eliphakathi linika kuphela i-64 kcal.
ziphangiwe okanye zizingelwe phantsi
Le ndlela yokupheka iqanda isefashonini kakhulu enkosi kumaqanda e-Benedictine amnandi, isidlo seenkwenkwezi sesidlo sakusasa esimnandi kunye nebrunch. Nangona i-hollandaise sauce ehlala ihamba nazo ineekhalori ezimbalwa, ayinabungozi ukuba uyithatha amaxesha ngamaxesha kwaye uyenzile ekhaya.
Kwimeko nayiphi na into, amaqanda aphekiweyo okanye aphekiweyo ngokwawo amnandi, alayishwa ngamavithamini, amaminerali, i-amino acids kunye neeprotheni, kwaye awatyebisi konke konke (okufana neqanda elibilisiwe, malunga ne-65 kcal).
Ewe, ubucinga ukuba iqanda eliqhotsiweyo aliphilile… Siza kukunika iindaba ezimnandi! Kuyinyani ukuba le ndlela yokupheka inika iikhalori ezimbalwa (malunga ne-110), kodwa azininzi kakhulu, kwaye uya kuphepha ezinye xa ukhupha amaqanda kakuhle xa uwasusa. Kwakhona, ukuba uyayenza ioli eyongezelelweyo enyulu enyulu Awuyi kubonelela ngencasa kuphela kodwa zonke iipropathi ze-EVOO yethu esiyithandayo.
Ngobu buchule bokupheka, ungathandabuzi ukusebenzisa yonke ingcamango yakho. Kwaye wenze ngaphandle kokuzisola ngokutya okunempilo nokutyebileyo onokucinga ngako: amaqhekeza e-tomato yendalo, ama-mushroom e-garlic, amanye ama-prawns, isipinashi, ityhuna, i-turkey, i-corn ... Ngenxa yokuba uya kufumana ikhosi yesibini, isidlo sasekuseni esinomunwe okanye isidlo sakusihlwa esinempilo njengoko sifumana. Amaqanda amabini aqhekekileyo ngaphandle kweoli awanikeli malunga ne-149 kcal.
I-omelette yeetapile engcwele i-caloric encinci kodwa iyacetyiswa kakhulu. Ngokwenyani, ukuba uzama ukuzibamba ngeemali onokuzifumana ngokuphindaphindiweyo. Ngokutsho kweSpanish Nutrition Foundation, inxalenye encinci ye-omelette yezambane ingaba malunga ne-196 kilocalories.
Ngokuphathelele kwii-tortillas ezifakwe okanye zaseFransi, akukho ngxaki ekuzibandakanyeni ekutyeni kwakho phantse yonke imihla. I-omelet yesiFrentshi enamaqanda amabini ingaba malunga ne-154 kcal.
Njengoko ubona, i iindlela enempilo ukupheka iqanda zahluka kakhulu kwaye kumnandi. Enyanisweni, xa kudityaniswe nokunye ukutya okunconyiweyo phantse akupheli.
Ngoko ke, musa ukulibala ukubandakanya amaqanda xa ucwangcisa ukutya kwakho kunye nosapho lwakho lonke, kuba uya kuba wenzela impilo yakho ububele ... kunye nepokotho yakho. Inzuzo ephindwe kabini!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » Ukutya » Ukusuka ekuphekiweyo ukuya kwi-poached: iindlela ezinempilo zokutya amaqanda
Ukutya okuphantsi kweekhalori ezingama-900 calories